Ohatrinona ny vidin'ny vehivavy mpitaingina bisikileta? - Bisikileta
Tena > Bisikileta > Womens pro bisikileta - mitady vahaolana
Womens pro bisikileta - mitady vahaolana
Ohatrinona ny vidin'ny vehivavy mpitaingina bisikileta?
'Fa izao eny an-dalana, ambonyVEHIVAVYdiakevitra35000 $ ka hatramin'ny 50 000 $. Amin'ny lafiny bisikileta an-tendrombohitra, ny tamponyVEHIVAVYdiakevitra$ 90,000 ka hatramin'ny $ 150,000. ' Young, izay nitaingina kariera nandritra ny folo taona, anisan'izany ny dia maro tanyAm-behivavyTour de France sy WorldBisikiletaTompondaka, nandao ny fanatanjahantena taorian'ny vanim-potoana 2001.
Ary miaraka aminay amin'ny GCN napetraka androany dia manana an'i Mayalen avy ao amin'ny GCN En Español, izay iray amin'izy ireo angamba. - Ah, tsia tsia (mihomehy), bisikileta fotsiny no tiako.
Tena sarotra ny misafidy mpamily 10 fotsiny. Ka raha tsy nahita na inona na inona izahay dia ny hevitra etsy ambany fotsiny no jerenao, iza araka ny eritreritrao no tokony ho ao amin'ilay lisitra? Lisitr'ireo mpamily samihafa izay mety tsy naheno anao akory, fa heverinay fa izy ireo no olon-dratsy amin'ny fanatanjahantena. (samy mihomehy) (mozika afovoany-hafaliana funky) - Andao atomboka amin'ny lehiben'ny bisikileta vehivavy sy ilay bisikileta nohaingoana indrindra tamin'ny fotoana rehetra, Marianne Vos, bisikileta 31 taona.
Amin'izao fotoana izao, tamin'ny faha-31 taonany fotsiny, dia nanana amboara tompon-daka eran'izao tontolo izao izy, fito tamin'ny cyclocross, medaly volamena olympika ary bisikileta an-tendrombohitra maro sy rakitsoratra. Nanomboka bisikileta aloha be izy rehefa nahazo aingam-panahy avy amin'ny zokiny lahy, saingy navela hiofana miaraka aminy fotsiny rehefa nanomboka nilalao dia tena nazava fa tena manan-talenta izy ary lasa tompon-daka eran-tany fony izy vao 19 taona, ka tena tsia manontany tena ianao hoe maninona no ataon'izy ireo hoe mpihinana olona. (mozika afovoany-hafaliana funky) - Laharana faharoa ao amin'ny lisitray, talenta vaovao izy io.
ArlenisAr Sierra, avy any Kiobà izy ary mihazakazaka ao amin'ny Ekipa Vehivavy Astana. Tsy maintsy nandresy ny politika, ny fahantrana ary ny fisarahana tamin'ny fianakaviany i Arlenis mba hahatratrarany ny nofinofiny. Tokony hikarakara azy ianao satria vao avy nandresy tamin'ny hazakazaka Ocean Cadel Evans Great Ocean, iray hijerena amin'ity taona ity. (mozika afovoany-hafaliana funky) - Nanafika ny sehatry ny hazakazaka ultra i Lael Wilcox tamin'ny 2016 rehefa nahavita ny hazakazaka Trans Am Bike 4,400 kilometatra.
saris taolana 2 famerenana
Tao anatin'ny 18 andro monja izy no nanao izany, salan'isa 235 kilaometatra isan'andro, miaraka amin'ny torimaso 5 ora isan'andro. Nahatratra ny mpitarika izy tamin'ny andro farany ary nahatratra azy ho vehivavy voalohany nandresy avy hatrany tamin'ny hazakazaka. I Lael dia nahazo aingam-panahy tamin'ny hazakaza-piara mahery vaika indrindra fony izy tany Israel ary nianatra tao amin'ny Holyland Challenge ary efa nitana ny firaketana ny lahy sy ny vavy tao amin'ny Baja Divide, izay niara-nanorina azy.
Ankoatry ny hazakaza-tsoavaly dia mitantana ny Anchorage GRIT ao amin'ny tanàna nahaterahany any Canada izy, izay mikendry ny hampiditra tovovavy maro kokoa amin'ny bisikileta. (mozika afovoany-hafaliana funky) - Vehivavy iray hafa izay nanao ny lisitray dia ilay bisikileta bisikileta norvezianina Gunn-Rita Dahle. Vao feno 46 taona izy, ary efa nisotro ronono tamin'ny hazakazaka amoron-tsiraka fa hanao marathon roa nefa mahatalanjona ny paladany.
Manana fandresena amboara eran-tany 30 sy tompondaka eran-tany sivy izy. Ary heveriko fa ohatra ho an'ireo bisikileta rehetra any izy satria nanana ny zanany lahy ary avy eo nandresy bebe kokoa. Tsara fotsiny izy. - Mahagaga. (mozika afovoany-hafaliana funky) - Tena natahotra ny ratsy indrindra izahay rehefa nesorina tamin'ny lalao Olaimpika 2016 tany Rio i Annemiek, saingy noho ny fahasitranana tamin'ny fomba nahagaga dia nanana ny iray tamin'ireo vanim-potoana tsara indrindra nananany tamin'ny taona lasa izy.
Manjaka tanteraka amin'ny andrana izy ary matetika no mpitaingina bisikileta misafidy bisikileta andrana ho an'ny zotra teknika sy ambony indrindra. Saingy izy koa dia mpitaingina GC tsy nahomby izay nandresy tamin'ny filaharana ankapobeny tao Giro Rosa tamin'ny taon-dasa ary nahatonga azy tamin'ny laharana niadiana tamin'i Anna van der Breggan tamin'ny La Course tamin'ny taon-dasa, izay azo inoana fa iray amin'ireo hazakazaka tsara indrindra tamin'ny vanim-potoana lasa - it dia. Ary izy koa dia nandresy tamin'ny Tompondaka Eran-tany tamin'ny Fitsarana Iraisam-pirenena tamin'ny taon-dasa.
Saingy nianjera tamin'ny hazakazaka amoron-dalana izy, saingy mbola ao amin'ny Target made ihany. Heveriko fa notapahiny ny taolam-beny ary avy eo dia naharitra ela ny fahasitranany, saingy mazava ho azy fa mpiady izy ary ho hitantsika izay andrasana ao anatin'ny fotoana fohy, ka zahao fotsiny izy, mahavariana izy. (mozika afovoany-hafaliana funky) - Eny, noho izany dia somary fitaka ihany ity.
Ny Adventure Syndicate dia vondronà vehivavy izay tsy vitan'ny hoe manan-talenta amin'ny bisikileta ultra lavitra fotsiny, fa miara-miasa amin'ny sekoly sy ny zazavavy kely ihany koa mba hahazoana olona maro amin'ny bisikileta ary hianatra fahaiza-miaina. Mpikambana vitsivitsy monja dia i Emily Chappel, izay iraky ny bisikileta taloha tany London izay nandresy tamin'ny hazakazaka Trans-Continental, ary i Scot Jenny G Raham, izay nanodidina an'izao tontolo izao, nanohana tena tamin'ny bisikileta iray, namaky tanteraka ny firaketana an'izao tontolo izao teo aloha ho an'ny vehivavy ary nahatratra 125 andro. 20 andro latsaka noho ny rakitsoratra teo aloha - Wow. (mozika piano jazzy) Ny manaraka izay tafiditra ao amin'ny lisitray dia Dame Sarah Storey.
Izy no bisikileta Paralympika be mpampiasa indrindra any Angletera. Sarah dia mpilomano tamin'ny Lalao Paralimpika efatra alohan'ny nifindrany tamin'ny bisikileta tamin'ny 2005. Hatramin'ny niovany asa dia nanampy medaly volamena sivy tamin'ny enina efa azony tamin'ny filomanosana i Sarah, ary nifaninana tamin'ireo atleta kilemaina i Sarah izay mandrafitra ny ekipa ho an'i Angletera. ny Lalao Commonwealth.
Izy koa dia manana medaly làlan'ny UCI miaraka amin'ny ekipa sembana. Tsy mampino izy. Nentiko tany amin'ny Lalao Paralimpika izy ary haingana dia haingana ianao tsy azonao an-tsaina. (Jazz Music) - Eileen Sheridan dia mpitaingina bisikileta andrana tsy mampino tanteraka izay namaky ny firaketana rehetra an'ny Fikambanan'ny Vehivavy Road Records tamin'ny taona 1940 sy 50.
Enina metatra fotsiny ny haavony ary fantatra amin'ny anarana hoe Pocket Rocket. Toa sahala amin'ny olona fantatsika fa tsy izany? - Emma. (mihomehy) (Vehivavy mihomehy mena) - Na eo aza ny fandrosoan'ny fitaovana, ny fiofanana ary ny sakafo, ny dimy amin'ireo rakitsorany dia mbola misy mandraka ankehitriny.
Ny iray amin'izy ireo dia ny firaketana an-tsary any London-Edinburgh, izay napetrany tao anatin'ny 20 ora mahery nandritra ny 700 kilometatra, izay mahatalanjona fotsiny. (Misento i Myalen) (mozika jazzy) - Manaraka izany ao amin'ny lisitray dia i Rachel Atherton. Izy no endrik'ilay hazakazaka bisikilety an-tendrombohitra midina.
Nahazo amboara eran-tany dimy izy. Saingy izy no manao ny lisitray satria mamporisika ny bisikileta ho an'ny vehivavy izy hanao an'ity fanatanjahan-tena tantanan'ny lehilahy ity. Tamin'ny taona 2016 dia nandrombaka ny amboara amboara eran-tany 10 nisesy izy ary nandresy ny hazakazaka rehetra nifaninanany ary nanana ny vanim-potoana tonga lafatra.
Ka mazava kokoa fa ambony noho ny fifaninanana izy io. Hainy ny mandresy ny fahalavoana be dia be ary tsy matahotra ny zavatra ataony satria mahavariana ny zavatra ataony. Haingam-pandeha eo anelanelan'ny vato sy hazo maro be izy io.
Tsy te-hanao izany aho. (mihomehy) - Fantatro fa mampatahotra ahy fotsiny izany. (mozika afovoany-vanim-potoana lohataona) - Alfonsina Strada no hany vehivavy nahavita ny iray tamin'ireo Grand Tour telo.
Nanomboka ny Giro d'Italia izy tamin'ny 1924 taorian'ny nahitàny ny fidirana an-gazety iray avy tamin'ny Gazzetta ary niantso ny tenany hoe Alfonsin fa tsy Alfonsina hiseho ho lehilahy. Nanomboka ny Giro d'Italia izy ary namita izany ho iray amin'ireo 30 fotsiny tamin'ny fanombohana noho ny toe-javatra mamitaka, ny fitaovana fototra ary ny akaiky ny lalana tsy azo aleha, ary tena nahavita 20 ora talohan'ny Lantern Rouge no voalohany ary mpitaingina bisikileta mahavariana indrindra ary mbola manome aingam-panahy antsika ankehitriny, zato taona vitsy taty aoriana - Mampino fa mafy tokoa ny tontolo bisikileta satria misy zavatra maro tianay hampidirina. Ka ampahafantaro anay amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany izay tianao indrindra na izay heverinao fa manome aingam-panahy indrindra Omeo thumbs up izahay raha mahatsapa ho mahazo aingam-panahy amin'ity lahatsoratra ity ianao raha te hijery ireo volavolan'ny kitay manokana ho an'ny vehivavy, mankanesa any amin'ny GCN fivarotana.
Ho an'ny lahatsoratra mahafinaritra iray hafa dia ity ny fanamby nianika an'i Emma niezaka ny hijery hoe hatraiza ny fiakarana vitany afaka adiny iray monja eto.
1. Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) Netherlands dia firenena matanjaka tsy azo iadian-kevitra aobisikileta vehivavy, rehefa namokatra Chantal Blaak, tompon-daka eran-tany amin'izao fotoana izao, Anna van der Breggen, tompon-daka Olaimpika manjaka, Annemiek Van Vleuten, mpandresy ny La Cour, ary nyLEHIBEMarianne Vos.
Haingam-pandeha no mitaingina vehivavy mpitaingina bisikileta?
Pro vehivavyekipa crank mivoaka ny andrana ekipa amin'ny hafainganam-pandeha 30+ mph. Ohatra, Eva Buurman sy ny ekipa avy amin'ny Team TIBCO-Silicon Valley Bank dia nanao salanisa 31 mph (49,9 km / ora) nandritra ny fotoam-pitsarana tamin'ny ekipa Giro Rosa tamin'ny taon-dasa (16,8 kilometatra / 10,4 kilaometatra).12 2021.
Inona no atao hoe FTP vehivavy tsara?
amin'ny ftpamin'ny watt isaky ny kilao ho an'ny vehivavy
47% ny olona no manana anamin'ny ftpambany 3.2W / kg. 45% ny olona no manana anamin'ny ftpan'ny 3.4W / kg na mihoatra. 8% ny olona no manana anamin'ny ftpeo anelanelan'ny 3.2W / kg sy 3.4W / kg.7. 2018.
Karazana vatana inona no tsara indrindra amin'ny bisikileta?
Arakaraka ny maha matanjaka anao no ahafahanao mifehy ilaybisikileta. 'Ny ankamaroan'ny sprinters an-tampon'ny lalana dia manana mesomorphicendrika bika, mirehareha amin'ny kardio miavaka sytsaraambony-kevi-pitantananahery hamenoana ny herin'ny tongony. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia hozatra izy ireo, manorina matanjaka ary mazàna manana metabolisma avo sy sela hozatra mamaly.
Ratsy ho an'ny vehivavy ve ny bisikileta?
Vehivavy bisikiletamety manana risika mitombo amin'ny fampivelarana ny UTI. Hahery vaikampitaingina bisikilety(bisikiletaNandritra ny 2 taona mahery, mihoatra ny in-3 isan-kerinandro sy ny salan'isa isan'andro maherin'ny 25 kilaometatra bisikileta) dia azo inoana fa hiteraka tsy fahampian'ny perineal sy fery amin'ny lasely.Bisikiletany karazana seza dia tsy nisy fiatraikany lehibe tamin'ny valiny.14 2017.
Inona ny FTP an'i Lance Armstrong?
Lance Armstrongdia nilaza fa afaka nanao salan'isa 495 watt nandritra ny 30-40 minitra.
Iza no vanim-potoana bisikileta tsara indrindra ho an'ny vehivavy?
Mahatsiaro ho hafahafa ny mandinika izay mpitaingin-tsoavaly hijerena ny vanim-potoana 2020 amin'ny volana Aogositra, fa ny 2020 dia herintaona tsy misy toa izany. Satria manomboka miverina any Eropa indray ny hazakazaka, dia miverina eny an-dàlana indray ny peloton'ny vehivavy.
Betsaka kokoa ve ny vehivavy amin'ny bisikileta noho ny lehilahy?
Ho an'ireo mpitaingina vehivavy, ny safidin'ny hazakazaka dia somary manify kokoa noho izy ireo ho an'ny lehilahy, ary ho an'ireo mpankafy bisikileta vehivavy, dia fahavaratra somary mampihoron-koditra ity. Na dia mihazakazaka miverina amin'ny kalandrie aza dia tsy maintsy marihina fa ny lehilahy dia mahazo fotoana betsaka kokoa noho ny vehivavy mihazakazaka, izay tsy mahagaga - nefa azo antoka fa mandiso fanantenana.
Iza ireo vehivavy bisikileta ambony indrindra any Etazonia?
Etazonia dia efa ela no nisy fanatrehana mafy amin'ny bisikileta amin'ny vehivavy. Ireo mpitaingina toa an-dry Kristin Armstrong, Evie Stevens, ary Georgia Gould dia samy nahita fahombiazana tamin'ny fanatanjahantena. Saingy mahalana no mahatratra vehivavy maro no tonga amin'ny sehatra avo lenta miaraka. Ankehitriny, andiana vehivavy amerikana vaovao no tafakatra amin'ny laharana voalohany amin'ny bisikileta.
bisikileta mitaingina lehilahy matavy